‘पुरानोको जग नभत्काईकन नयाँ निर्माण हुँदैन’ : मिश्र « Anumodan National Daily
‘पुरानोको जग नभत्काईकन नयाँ निर्माण हुँदैन’ : मिश्र
प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७३, सोमबार १३:०१
मिश्रजी, परिवर्तन भनेको केहो ? पुरानालाइ नयाँले विस्थापन नगरी परिवर्तन कसरि सम्भव हुन्छ ?
जहिले पनि हामीले गरेको तर्कको आधार के हो भने ‘पुरानोको जग नभत्काईकन नयाँ निर्माण हुँदैन ।’ पुरानोको जग भत्काउन पनि ठाउँ हुन्छ । परिवर्तनको चाहना गर्ने मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने परिवर्तन भनेको केवल सैद्धान्तिक् ।
्कुरा होइन । सैद्धान्तिक परिवर्तनले मात्रै परिवर्तन आउँछ भन्ने जड धारणाबाट हामी अधिकांश ग्रस्त छौँ । यदि म माओवादी हुँ भने माओवादीले नै लिएको अडानबाट परिवर्तन सम्भव छ भनेर सोच्छु । यदि म काङ्गे्रस हुँ भने काङ्ग्रेसले नै लिएको अडानबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्छु । एमाले छु भने त्यही ठान्छु । राप्रपा नेपाल हुँ भने म त्यही ठान्छु, । होइन, परिवर्तन त्यसरी आउँदैन । त्यसरी सिद्धान्तको लडाइँ मात्रै हुन्छ र त्यो सिद्धान्तको लडाइँले के हुन्छ ? तपाईँ र हामीजस्ता मान्छेहरू टेलिभिजनमा बसेर बहस गर्छौँ, तर्क–वितर्क गछौँ । देश कसरी बनाउने भनेर खूब आपूmले पढेको, अनुभव गरेका त्यो विचारहरू छाट्छौँ । तर त्यो होइन । विचारले परिवर्तन हुने होइन । त्यो परिवर्तन भनेको गरेर परिवर्तन हुने हो ।
हाम्रोभन्दा दक्षिणको छिमेकी राष्ट्र संसारकै सबैभन्दा ठुलो भनिएको लोकतान्त्रिक देश हो । हाम्रो उत्तरपट्टि संसारको सबैभन्दा ठुलो साम्यवाद देश, उसले गएको विष–पच्चिस वर्षमा सिङ्गो युरोपको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै ठुलो जनसङ्ख्यालाई गरिबीबाट उकासिसक्या । हाम्रो छेउमा भुटान छ, भुटानमा अभैm पनि राजतन्त्र छ । अलिकति एउटा बन्द किसिमको प्रकृतिको समाज छ । अभैm पनि भुटानको आर्थिक वृद्धिदर भारत र चीनको भन्दा बढी छ । भुटान मजाले विकास गरिरहेको छ । वातवरणको संरक्षण गरिरहेको छ । भारतसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध राखेर ठुला–ठुला हाइड्रोपावरहरू निर्माण गरिराखेको छ । थिम्पु भएर बग्ने नदीमा नीलो पानी बगेको छ । थिम्पु बजारमा हरेक घरअगाडिको घरले अग्रभाग भुटानकै संस्कृति झल्किने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । आजको दस वर्षमा त्यो भुटान साँच्चिकै साङ्ग्रिला हुँदै छ । विदेशीहरूले त्यहाँ दिनको दुईसय पचास डलर खर्च गर्न सकेन भने प्रवेशसम्म पनि दिँदैन । उसले पनि विकास ल्याइराखेको छ । खाडी क्षेत्रमा हेर्नुस, अभैm पनि पापीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा खसी काटे भैmँ काटिन्छ । तर खाडी क्षेत्रका देशहरूले कति प्रगति गरेका छन्, हामीले देखिराखेका छौँ । त्यसपछि युरोप, युरोपमा कुनै देशमा राजतन्त्र नै बाँकी छ । कुनै देशमा गणतन्त्र नै छ । अमेरिका, रुस हरेक देशमा ठाउँमा सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न–भिन्न किसिमका राज्य–व्यवस्था र भिन्न–भिन्न सोच छन् । सबैले परिवर्तन गरिराखेका छन् । तर हामीचाहिँ बहुदल राख्ने कि नराख्ने ? जनताको गणतन्त्र भन्ने कि नभन्ने ? राजतन्त्र चाहिने कि नचाहिने भनेर वर्षौंदेखि दशकौँदेखि बहस गरिरहेछौँ ।
अध्ययन, अनुभव र भ्रमणको क्रममा विभिन्न किसिमका राज्य–व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा तपाईँ जानुभयो । राज्य–व्यवस्था कस्तो चाहिन्छ त ? के भन्छ तपाईँको अनुभवले ?
तपाईँले भन्नुभएको राज्य–व्यवस्थापन स्केनडेभियन देशहरूको जस्तो ?
– ती देशहरूमा छ । कैयौँ अरू युरोपेली देशहरूमा छ । अस्ट्रेलियाजस्तो, न्युजिल्याडजस्तो देशहरूमा छ । डिग्री अलिकति फरक छ । बेलायतमा पनि छ । मूल रूपमा चाहिँ स्क्यानडेभिएन देशमा छ । मेरो धारणा के हो भने राज्य असाध्यै समृद्ध र असाध्यै शक्तिशाली हुनु पर्दैन, किनभने नर्वेको उदाहरण तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ । त्यसै गरी अरू उदाहरणहरू छन्, राज्य ठिकैसँग समृद्ध भए पनि पुग्छ । त्यो समृद्धिलाई राज्यले र त्यहाँका नागरिकहरूले कसरी बाँडीचुडी गरेका छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यस किसिमको सोचको विकास गर्नको लागि हाम्रो जस्तो समाजमा मलाई के लाग्छ भने एउटा परोपकारी समाज निर्माण गर्नुप¥यो । बच्चालाई खुवाउन नसकेपछि अँगालेर कर्णालीमा हाम्फालेर मरेकी आमाको पीडाले तपाईँ–मलाई छुनुप¥यो । चेपाङहरूको बस्तीमा तीन–चार दिनसम्म केही पनि खान नपाएपछि घाँस लुछेर खाँदा घाँटीमा घाँस अड्किएर मरेको बच्चाको पीडाले हामीलाई छुनुप¥यो ।
हामीले अधि स्केन्डेभियनको कुरा ग¥यौँ, उनीहरू जुन रूपमा नेपालमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, यो धर्म तथा सामाजिक कार्यहरूको नाममा, राजनीतिक दलहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध र त्यसको अनुदानका नाममा जसरी प्रस्तुत भएका छन्, त्यसले तपाईँले अघि भन्नुभए जस्तो राज्य–व्यवस्थामा लान्छ हामीलाई ?
– मेरो त विदेशीहरूलाई र विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनलाई जो नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वमा काम गरिरहेका सङ्गठनहरू छन्, यिनैले जब सीमान्तकृत मानिसहरूको आवाज भनेर भन्छन् र त्यसका लागि पैसा खर्च गर्छन् । म तिनीहरूलाई मौका पाएँ भने के भन्थेँ भने तिमीहरू सीमान्तकृत समुदायलाई आवाज होइन राम्रो स्कुल देऊ भन्थेँ । तिनीहरूले राम्रो स्कुल दिए भने दस वर्षमा आवाज उनीहरूको आपैmँ अभिव्यक्त हुन्छ । कुनै युरोपेलीले आएर आवाज दिनुपर्दैन । तर तपाईँ राम्रो शिक्षा नदिईकन मान्छेलाई आवाज दिनुहुन्छ, त्यसले समाजमा अराजकता सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यहाँ माछा दिइयो, बल्छी दिनुपथ्र्यो ।
(रविन्द्र मिश्रसंग पत्रकार किरण मरहठ्ठाले एबिसी टेलिभिजनको कार्यक्रम क्रसचेकमा गरेको कुराकानीमा आधारित)